China Mgbagha China Manufacturers & Suppliers & Factory
Mgbagha - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 8 Ngwaahịa maka Mgbagha)
60W UFO High Bay LED Ìhè
60w Ufo Led Lights nwere ike dochie 200W HPS / MH Bulbs Equiv, 60w Ufo Mbara bụ mgbanaka dị mma maka oriọna ọkụ ọkụ, mgbidi ọkụ ma ọ bụ akara HID, ọkụ ọkụ ọkụ nke ọkụ ọkụ, Ufo High Bay Led bụ maka ụlọ ọrụ, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa, ụlọ akụ, ụlọ gas, ụlọ nkwakọba ihe, na ebe...
Ihe nkesa nke 120W na-ekpuchi ọkụ
AKWỤKWU NDỊ KWURU - Bbier 120W Akpa Ngwongwo Azụ maka Ogwe Uhie kwadoro ngwa gị na ngwa ngwa nke kachasị mma. Nke a na- erechasị kits High Bay nwere ihe kachasị emetụ n'ahụ nke 120LM / W na iji mgbapụta na-arụ ọrụ ike ma na-arụ ọrụ maka mgbanaka 400-watt metal halide na nrụgide sodium dị elu. MGBE OGE OCHIE - Site...
50W Ejiri Oghere Garage na Ihe Motion Sensọ
Uhie Kwadoro 50W Ebube Mgbagharị Mgbaji nwere nnukwu mma Diana ibe na Philips LUMILEDs nwere nnukwu ìhè. Igwe Garage a na Motion Sensor bụ ETL depụtara nke pụtara ndị a Garage Led Light Fixtures na -esonyere a 5 Afọ ikike. Mgbanwe a na-arụ ọrụ ụgbọ oloko a dị mma mee ka ìhè dị nro, nke bụ ihe nchekwa dị mma maka anya....
ETL DLC 320W Ogwe Ọdụ Ụgbọọrụ Lot Ìhè
Ụgbọala anyị na- eburu ebe a na-edebe bọmbụ ụgbọala 320W nwere ihe mgbochi na-ebugharị ma ọ bụ ihe nkedo aka nkwụnye aka iji dabaa ogwe ma ọ bụ ogwe ogwe aka. Nke a 320w Mpempe ụgbọala Lot Light Fixtures na -adị mfe dochie 1000W MH HPS HID bulbs. 320w Egwuregwu Ngwá Agha Na-adọba Ngwá Agha bụ DLC premiom maka...
20W Kachasị Anyanwụ Na-acha Mkpụrụ Obi 2019
Nke a nile n'ime anyanwụ kachasị mma ogige ọkụ 2019 Ezubere iji rịgoro n'elu ogige dị. Ogige Nchekwa Ubi anyanwụ dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ka ọ dochie gas ma ọ bụ oriọna ọkụ ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a pụrụ iche Mgbaghara Mkpụrụ Okpomọkụ ejiri ya na SMD LED nke nyere 3000 Lumens na njuputa zuru ezu....
100W Ihe Ngbawa Na-agbawapụ Na-enwu n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ukwu
Nke a 100W Mmiri Na-eme Mberede Oké Osimiri Bay ejiri mee ihe maka ebe a na-adọba ụgbọala, ụlọ nkwakọba ihe, ụgbọ ala ụgbọala, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ogbako. 100W High Bay nwere ọkụ ọkụ maka ere nwere ike dochie 300W HPS MH HID. Ihe mgbagha ahụ gbaghaara ọkụ ọkụ bụ ETL DLC kwadoro yana afọ 5. Nke a mere ka ụlọ ọkụ dị...
150w Sensor Mgbaghara nke Kachasị Elu
The 150W High Bay Lighting Motion sensọ na- enye ihe ịrịba 19500 lumens.This Best High Bay Lighting ájá dị nro na-eguzogide ọgwụ na-ehicha ma ọ bụ nkwụsị ihe nhicha na-ehicha. Ọdịdị ọkụ 150 anyị nke High Bay bụ IP65 maka ọnọdụ ime ụlọ na n'èzí. Nke a mere ka ọkụ ụlọ nkwakọba maka ire ere maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ...
Mgbagha Ejiri Mgbacha Mgbapu Mgbaaka Mgbacha ọkụ Mgbacha ihu igwe Ufo Mbara Ebube Mgbachi Anya Mgbapu 80W